Ukufakwa ngaphakathi kubhedu kunye neentonga zobhedu nge heater ephindaphindiweyo yokugquma
Induction I-bronze ye-bronze kunye neentonga zobhedu kunye nemitya ukuze ithathe indawo yokusebenza kweetotshi. Inkqubo yangoku yetotshi ineziphumo zokungcoliseka okugqithisileyo kwindibano, kwaye ifuna ukuphinda iphinde yenzeke emva komsebenzi wokutsha.
Umatshini we-DW-UHF-40KW oomatshini bokuchwetheza okuphezulu
Iikhoyili ezimbini ezijika zivulelekile
• Iplate yekopi yekhuphoni kunye nentonga yobhedu
• Ucingo lwerhasi - EZ Flo 45
• I-alaze alloy-45% isilivere, 1/32 DIA
Ubushushu: Malunga ne-1350 ° F (732 ° C)
Ixesha: I-avareji yexesha - imizuzwana engama-25
Ukuze ungenise ipleyiti yokufaka ubhedu kwi-coupon kunye nentonga yobhedu. Kwimeko yokuvelisa, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe amazantsi e-EZ Flo 45. Iingqungquthela zamiselwa (jonga iifoto) kwaye shushu ixesha eliphakathi lama-2s ukuhambisa ialloy kunye nokufezekisa ukukhanya.
Ngenxa yokuchasana kwesinyithi okwahlukileyo phakathi kobhedu kunye nobhedu, ubhedu lobushushu lobhedu ngokukhethekileyo. Ikhoyili yenzelwe ukoyisa imivalo ukuya kwisahlulo secandelo ishushu izithsaba kwaye ubushushu buhanjiswa kwipleyiti ngakumbi ngokuhambisa kunokubangela ukuba imivalo kuqala ifike kubushushu ngaphambi kweplate. Ukuba izixhobo ziyafana (usebenzisana nobhedu okanye ubhedu kubhedu, oku akuyongxaki.Ukuba ubhedu lubhedu kwaye ipleyiti yethusi lubhedu akukho micimbi-kuphela xa ibar ibhedu kwaye ipleyiti ilubhedu. Oku kufuna) Amandla okucuthwa ukuvumela ukubopha ukuhanjiswa kobushushu ukusuka kwintonga yobhedu kwiplate yobhedu.
Amaqhinga aqinileyo ahlalayo
Ukukhethwa kunye nokuchaneka kwendawo yokushisa, okubangelwa ukuphazamiseka okuyingcipheko kunye nokuxinzelelana ngokubambisana kune-welding
Imijikelezo yokutshisa ngokukhawuleza
Iziphumo ezingaphezulu ezifanelekileyo kunye nokufaneleka kwemveliso enkulu yemveliso, ngaphandle kwemfuneko yokucutshungulwa kweetch
Ekhuselekileyo kunokuba i-flame brazing
iindidi Teknoloji tags ukugquma, ubhedu olukhazimlisiweyo, ubhedu obhedu, ubhedu olukhazimlisiweyo, nobhedu, Ubume obuninzi Ubhonkco obhedu, ukukhangela ibhondi, ukukhangela ubhedu obhedu, ukuqhelisela ukujonga iintonga zethusi Post yokukhangela
Amanqwanqwa aphezulu e-Brazing Freits Freitency